Fahatafintohinana Manoloana ny Kolikoly Lalina eo amin’ny Politisiana ao Espaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Febroary 2013 14:21 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Italiano, русский, srpski, 繁體中文, 简体中文, Español
Ahitana trangan-javatra lalindalina [matotra] kokoa tahaka ny filazana fa misy karama ambany latabatra omena ny mpikambana sasany ao amin'ny Antokom-Bahoaka (PP) [es] izay antoko mitondra ao Espaina, ny famotorana momba ny raharaha kolikoly politika fantatra amin'ny anarana hoe “”Gurtel. Hadihadiana amin'ny fananana kaontim-bola 22 tapitrisa euros any Soisa sy amin'ny fandoavana tambin-karama ambany latabatra nandritra ny fotoana maro nitazonany andraiki-panjakana ambony, ankehitriny i Luis Barcenas, mpitahiry volan'ny Antokom-Bahoaka teo aloha, izay mbola nitana ny andraikiny tapa-bolana lasa izay ary nanana ny biraony tao amin'ny foiben'ny antoko sady notohanan'ny mpitarika tamin'izany fotoana izany.
Ity no mety ho raharaha kolikoly goavana indrindra eo amin'ny tantaran'i Espaina, ary na dia teo aza izany, dia nandà ny fiampangana azy ireo, ary mbola nieboebo fa manana kaontim-bola madio, sy mangataka hatrany ny olona “hanitsy ny tetibolany” noho ny krizy mandalo. Mba hahazoana indray ny fitokisan'ny olom-pirenena sy hanaporofona ny fahadiovany, dia nanome vahaolana toy famotopotorana ny fahazoam-bola sy ny filazana arahim-pianianana ny vola miditra ao aminy [es] ny mpikambana ao amin'ny antoko nefa vao maika nahatezitra ny vahoaka izany.
Sarintanin'ny kolikoly ara-politika ao Espaina. Avy amin'ny Corruptodromo. CC BY-SA
Niteraka sahotaka goavana ka nitarika fanoherana an-dalambesy tamin'ny tranokala mihitsy ity raharaha ity. Na dia tapatapaka noho ny fahamaroan'ny olona be loatra nandritra ny tontolo andro aza ny Twitter, dia niezaka niantso hanaovana sit-in manoloana ny [foiben'ny] antokom-bahoaka [es] ao Madrid ihany ireo mpisera aterineto. Tahaka izay efa nitranga teo aloha, nanodidina ny lalana Génova, izay toerana ahitana ny foiben'ny antoko, ny polisy, kanefa mbola maro ny nanohitra hatrany ny vahoaka tamin'ny fitanisana hoe “Miala ny governemanta”, “Ao, ao ny zohin'i Ali Baba” ary ny “Jiolahy ny Filoha”
Hatramin'ny namoahan'ny gazety El Pais ireo tahirinkevitra tsiambaratelo [es] izay nanaporofo ny fampidiram-bola tsy ara-dalànan'ny antokom-bahoaka (PP), dia lasa karazana rafi-panohanana ny hiakiakam-bahoaka ny media sosialy. Nisy fanangona-tsonia iray ao amin'ny Change.org, izay mbola misokatra hatramin'izao, niezaka nanangona sonia hatramin'ny 100.000 tao anatin'ny 10 ora [es] mitaky ny fialan'ny governemanta espaniola. Ankoatr'izay, fisantarana andraikitra iray miantso ny vahoaka espaniola handefa fanehoan-kevitra an'arivony miaraka amin'ny sarim-balopy (heverina ho napetraka anaty valopy ny vola) ao amin'ny rindrina Facebookn'ny antoko [es]. Tsy afa-namafa ireo hafatra rehetra ireo ny sampana fifandraisana ao amin'ny antoko.
Afisy mahatsikaiky mifandraika amin'ny fanaovana hetsika. Nalaina tao amin'ny Periodismo Humano noho ny alalana CC Licence
Lasa lohahevitra nironana nanerana izao tontolo izao, araka ny voalazan'ny media maro ilay tenifahatra #lospapelesdebárcenas (gazetin'i Barcena). Misy ihany koa ny tenifahatra mifandraika aminy ao amin'ny Twitter. Ohatra, #pelisvonbarcenas (sarimihetsika miaraka amin'ny Barcenas) no nanokatra ny efitra ho an'ny mpisera aterineto ho fitadiavana aingam-panahy sy hatsikana ho fanehon-kevitra amin'ireo vaovao amin'ny alalanny fampiasana ny anarana voatonona anaty sarimihetsika mba entina hanasongadinana fa efa mihoatra noho izay fahita amin'ny horonantsary ny zava-misy iainana. Nisongadina ny Tenifahatra # DondeestaRajoy (aiza i Rajoy?) ho fomba iampangana ny fahanginan'i Mariano Rajoy (Filohan'i Espaina) satria tsy nanao fanambarana mikasika ity raharaha ity izy na amin'izay mety mahavoarohirohy azy.
Fijery avy aty ambony ny sit-in teo anoloan'ny Antokom-bahoaka tao Madrid. Saripika avy amin'ny Periodismo Humano navoaka noho ny alalana CC Licence
Nitatitra ny halalin'ny toe-draharaha andalovan'i Espaina ny gazety iraisam-pirenena, ary maro ireo mpisera aterineto no nampivoitra fa, ny governemanta,fa tsy ny mpitolona, no manimba ny endrik'i Espaina any ivelany, raha niresaka momba ny fanamelohana ataon'ny governemanta.
@LivingInGreen: Rehefa manao fihetsiketsehana isika, dia manimba ny endrik'i Espaina. Fa tsy hoe rehefa mangalatra ny antokon'ny governemanta. #lospapelesdeBárcenas mahita vao mino
Manan-kolazaina ihany koa ny bilaogera espaniola amin'ity fanafintohinana ity. Namoaka lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Tolo-kevitra kely 4 ho an'ny revolisiona ao Espaina” [es] i Principia Marsupia. Miantso ireo mpikambana ao amin'ny antoko ity lahatsoratra ity sy ireo mpiasa, miantso ireo olom-pirenena manana kaontim-bola any amin'ny banky, miantso ny mpitana biraon'ny orinasa stratejika sy any amin'ny asam-panjakana mba hiampanga ny tsy zava-tsy manjary sy hidina an-dalambe hampitsaharana ireo fanafintohinana ara-bola efa mandona mafy ny firenena. Toa efa mahazo vahana sahady ity fanoherana ity rehefa nametra-pialana sy niala tao amin'ny governemanta [es] ireo Ben'ny tanàna sy mpikambana sasany ao amin'ny antoko.
Naneho ny raharaha toy izao ny bilaogera:
Ny sasany aminareo mpirona havia [ara-politika] ary ny sasany kosa havanana. Manantena aho fa tsy hiova mihitsy: ny fifanenjanana ara-potokevitra sy ny adi-hevitra no fepetra voalohany ho an'ny fiaraha-monina mandroso. Kanefa mino aho fa ny ankamaroanareo dia hanaiky fa efa tonga eo amin'ny fetrany ny fahalotoan'ny rafitra ara-politika ka afa-miara-miasa isika amin'ity tetikasa ity.
1 andro izayEspaina